အစာစားခြင်းမမှန် | USAHello | USAHello
Eating disorders are problems with eating because you have bad thoughts about your body. သငျသညျအစှနျးရောအလေးချိန်အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်သွားပါလေစေ. You may eat too little or too much. These disorders cause serious physical illness.
ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုသင်ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုခံစားရပုံကိုဆိုလိုတယ်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရူပယုံကြည်မည်သို့မည်ပုံ. တစ်ဦးအစာစားခြင်းရောဂါနှင့်အတူ, you make big changes to your eating habits because of your body image. You always try to control your weight. ဥပမာ, သငျသညျအဆီများမှာကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရဘာလို့လဲဆိုတော့သင်မဟုတျပါလျှင်ပင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအနည်းငယ်သာစားရကြမည်. မဆိုလူတစ်ဦးမမှန်မစားခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့, ပိုပြီးအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်တစ်ဦးအစာစားခြင်းရောဂါရှိ.
သငျသညျသိရပါအခါ Anorexia nervosa ဒါပေမယ့်သင်ဆဲအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကွိုးစားပါ. သိရပါသင်သည်သင်၏အမြင့်နှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အလုံအလောကျချိန်မရဆိုလိုတယ်. သငျသညျ anorexia nervosa ရှိပါက:
သငျသညျတခါတရံအစားအစာတွေအများကြီးစားတဲ့အခါမှာ Bulimia nervosa သည်နှင့်သင်အစာစားသောအရာကိုမထိနျးခြုပျနိုငျသကဲ့သို့ခံစားရ. သငျသညျအစာကိုအများကြီးစားရကြပြီးနောက်, သငျသညျအစာအာဟာရကိုဖယ်ရှားပစ်ရရမယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရ. သငျသညျ bulimia nervosa ရှိပါက:
You may make yourself vomit (တက်ပစ်) သငျသညျအစာကိုအများကြီးစားရကြပြီးနောက်.
သငျသညျလွန်းအစားအစာကိုစားနှငျ့သငျရပ်တန့်နိုင်ဘူးကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရသည့်အခါ Bing စားဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအနညျးဆုံးသိပ်အစာကိုစား2ကြိမ်အပတ်တိုင်းများအတွက်6လများ. သငျသညျအများအားဖြင့်ဝမ်းနည်းခံစားရ, ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ, သငျတို့သကိုစားအပြစ်ရှိပြီးနောက်.
သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့အခြားလူများအနေဖြင့်ဖိအားများခံစားရ. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးမော်ဒယ်သို့မဟုတ် dancer လျှင်, ကလူကိုသင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပျကွောငျးသငျသညျကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
သငျသညျအနိမ့် Self-လေးစားမှုရှိ. အနိမျ့ Self-လေးစားမှုသင်ကောင်းတစ်ဦးလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာသင်ဘာမှလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်မယုံများမှာစဉ်းစားကြဘူးသည့်အခါဖြစ်ပါသည်.
အစာစားခြင်းမမှန်လေးနက်များမှာ. သငျသညျအကူညီမတှေ့ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျဆိုးဆိုးရွားရွားသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးစေခြင်းငှါ,. လူအများစုဟာဆေးမလိုသော်လည်းတချို့လူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ကုထုံးသို့မဟုတ်စိတ်ပညာရှင်ပြောပြရန်လိုအပ်ပါတယ်.